Tunisia bụ ebe ndị njem Russia na-anụ ọkụ ọkụ maka mmefu ego
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmelite nke Njem njem » Tunisia bụ ebe ndị njem Russia na-anụ ọkụ ọkụ maka mmefu ego
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Resorts • Akụkọ na -agbasa Russia • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ kacha ọhụrụ na Tunisia • Akụkọ dị iche iche
Site na Jenụwarị ruo Nọvemba 2019, ihe dị ka ndị ezumike 632,000 Russia gara Tunisia. Ihe dị ka mmadụ 3000 ga-eme ya tupu ngwụcha ọnwa Disemba. Nke a bụ 5% mmụba na ọnụọgụ site na afọ gara aga.
Dabere na onye isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem mba na Tunisia, ihe dịka nde ụmụ amaala mba ofesi ruru Tunisia na ngwụsị afọ.
Russia nọ n'ọnọdụ nke abụọ nke ụmụ amaala gara Tunisia. France buru ụzọ. Germany bụ nke atọ.
Dịka, ndị Russia na-aga ezumike na Tunisia maka ụbọchị 7-10, na-ahọrọ ụlọ nkwari akụ atọ ma ọ bụ kpakpando anọ. Imirikiti ndị njem si Russia na-eso ezinụlọ.
Tunisia bụ ihe ama ama na ndị okenye, ebe ntụrụndụ nke mba a na-enye mmemme ahụike dị mma. Ndị ọchịchị na-ahụ maka njem nlegharị anya na Tunisia na-achọ ime ka ndị njem nleta na-arụ ọrụ kwa afọ, nke mere na enweghị mbido na mgbada n'ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa si mba ọzọ.